China workshop industrial evaporative air cooler China Manufacturer XK-18/23 / 25S ifektri kanye nabaphakeli | XIKOO
XK-18/23 / 25S workshop evaporative zezimboni umoya opholile iyona ethandwa kakhulu zezimboni umoya opholile. Siklame ngamandla ahlukene u-1.1kw, 1.3kw, 1.5kw ukuhlangabezana nokufunwa okuhlukile. Futhi kukhona phezulu, phansi, ohlangothini lomoya ukuze kufakwe kahle odongeni, ophahleni nakwezinye izindawo. Kusetshenziswa ukupholisa isitshalo se-60-80m2 endaweni enomswakama kanye nesitshalo se-100-150m2 endaweni eyomile.
XK-18/23 / 25S imodeli yezimboni yomoya opholile ifakwe izingxenye zekhwalithi yezimboni, kufaka phakathi umzimba omusha we-PP omusha, i-anti-UV, ukulwa nokuguga, isikhathi eside se-15years. I-100% yemoto yethusi, isilinganiso sobufakazi bamanzi i-Ip54. Inayiloni nensimbi yengilazi nefeni yensimbi, kudlule isivivinyo sokulinganisela esinamandla ngaphambi kokusebenzisa. Ukumelana nokugqwala kanye nepompo lamanzi elisebenza kahle kakhulu, amahora angama-13000 aqhubekayo esebenza isikhathi sokuphila. I-10cm pad yokupholisa ukuphakama, ngaphezu kwe-80% rate evaporative.Glue seal water proof circuit board have Over over protection, over currency protection, water shortage protection and full-automatic drainage function. Iphaneli yokulawula ye-LCD enezivinini ezihlukene eziyi-12. Amanzi ethangi lamanzi angafakwa inzalo ngedivayisi yesibani se-UV (ngokuzithandela)
Ukulethwa Komoya (ipayipi)
XK-18S / phansi
I-XK-18S / uhlangothi
XK-18S / phezulu
XK-23S / phansi
I-XK-23S / uhlangothi
XK-23S / phezulu
XK-25S / phansi
I-XK-25S / uhlangothi
XK-25S / phezulu
I-XK-18/23 / 25S i-workshop evaporative air cooler ine-cooling, humidification, ukuhlanzwa, ukonga amandla eminye imisebenzi, isetshenziselwa kakhulu i-workshop, ipulazi, indawo yokugcina impahla, i-greenhouse, isiteshi, imakethe nezinye izindawo.
Langaphambilini Isitayela se-europe sokupholisa umoya sokusetshenziswa kwezimboni - uhlelo olusha oluphakeme lwamapayipi opholile XK-25H - XIKOO
Olandelayo: Ukupholisa okusha kwe-12cm thickness pad industrial industrial XK-18/23 / ST
China umoya opholile
umoya opholile wezimboni
Ikhishi Lomoya Opholile
I-Oem Air Cooler
I-Wall Mounted Industrial Air Cooler
isimungulu ezimbonini amanzi centrifugal evaporative a ...